इम्युनिटी बढाउन के गर्ने? – Panchakoshi Daily
इम्युनिटी बढाउन के गर्ने?
सुन्तला पनि भिटामिन सीले भरपुर फल हो। यसमा प्रसस्त मात्रामा पोलिफेनोल हुन्छ। जसले भाइरल संक्रमणबाट बच्न मद्दत गर्छ। इम्युनिटी बढाउन चाहने मानिसले दैनिक सुन्ताको सेवन गर्न सक्छन्। -नेपाल समयबाट